, साथीहरूसँग भेट्ने Lasagna पकाउन, एक भान्जी लागि वरदान किन्न, चक्की लिन मेल जाँच ... हरेक दिन हामीलाई पर्खिरहेका कुराहरू सूची, यो अनिश्चितकालीन जारी गर्न सकिन्छ। प्रत्येक मामलामा समसामयिक र सही प्रदर्शन आवश्यक छ। सबैले कुनै दोष नभएको स्मृति घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ। डायरी - ठूलो कम्पनीहरु, कार्यालय कार्यकर्ता, Housewives र ठूलो परिवार को आमा को प्रबन्धकहरू स्थापित गरिएको छ बेबदल आज कुरा गर्न मद्दत गर्न। आधुनिक ग्याजेटहरू, जो अवस्थामा र योजना रेकर्ड गर्न कार्यक्रम को एक किसिम प्रस्ताव गर्दै छन्, तर यो बाबजुद केही मानिसहरू डायरीहरू त्यागेर - वास्तवमा, Ezhednevnik एकदम त्यहाँ प्रतिस्थापन।
किन kazhdodnevnik राख्न?
तपाईं बिर्सने हो भने, छैन भेला र धेरै व्यस्त व्यक्ति, त्यसपछि तपाईं आवश्यक एक डायरी राखन सुरु गर्न। भविष्यमा उहाँले तपाईंलाई बाहिर योजना ढिलाइ गर्न, र अनुशासन पालना, समय सबै काम पूरा गर्न accustom हुनेछ। यो मात्र हामी कम्तिमा आफ्नो आफ्नै डायरी राखन सुरु गर्न प्रयास गर्नुपर्छ।
समय अचानक एक डायरी राखन तपाईं खुशी दिन्छ कि छैन र मदत गर्दैन महसुस हुनेछ भने, यो हरेस राम्रो छ।
कसरी डायरी राख्न?
त्यहाँ dailies गरिरहेको धेरै तरिकाहरू छन्, यो सबै के ढाँचा तपाईंले चयन मा निर्भर गर्दछ। पसलहरुमा तपाईं एक तयार बनाएको नोटबुक, जो बाहिर गर्न सकिन्छ सबै वर्ष दौर खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो व्यापार ब्लग मा पहिलो पृष्ठ 1 जनवरी मा सुरु हुन्छ। प्रत्येक दिन घण्टा विभाजित छ, यो पनि प्रविष्टि फोन, र अन्य महत्वपूर्ण तिथिहरु लागि एक क्यालेन्डर पृष्ठ छ। यो डायरी पात्रो एक दिन सभाहरू धेरै, फोन र वार्ता भएका व्यापार र कार्यालय श्रमिकहरुलाई सुविधाजनक छ।
असामान्य डायरीहरू पनि स्टोरमा किनेको गर्न सकिन्छ। यो कठिन कवर मा एक मोटी पुस्तक हुन वा सेल लाइन हुन सक्छ। बेचिएको र मूल डायरीहरू चित्रहरु संग मुद्रित।
एक डायरी कसरी चयन गर्ने?
कार्यालय कर्मचारीहरूको लागि व्यापार नोटबुक को एक विकल्प एकदम, सजिलो त दैनिक, छनौट काम गर्न भन्दा आफूलाई बढी, गर्नेहरूलाई आफ्नो विचार, रहस्य, योजना लेख्न, र यति मा। ई निर्णय गर्न भने, यो धेरै कठिन हुनेछ। आखिर, कि कार्यालय आपूर्ति बेच्छ कुनै पनि स्टोर, सबै स्वाद अनुरूप धेरै फरक नोटबुक को धेरै।
यो किताबहरु बिक्रि असामान्य डायरीहरू छ। मूल्य तिनीहरूले छ एक सानो अधिक महंगा, तर यो र यस्ता kazhdodnevnika धेरै को खुशी। पहिलो, आफ्नो मा मालिक को नाम रेकर्ड गर्न, चित्र को एक ठूलो संख्या, साथै व्यक्तिगत लाइनहरु, फूल र फ्रेम संग सजाया संग सजाया। धेरै सुन्दर डायरीहरू प्रसिद्ध ब्रान्ड "Moleskine" उत्पादन गर्छ। Diaries र sketchbooks इटालियन दृढ "Moleskine" बाट भ्यान Gogh, पिकासो र हेमिंग्वे जस्ता दिग्गज तथ्याङ्कले लाग्यो।
केही किशोर विशेष गरी बालिका, डायरीहरू पनि छन्। आफ्नो डायरीहरू मा, तिनीहरूले विचार, विचार, भावना, योजना र पनि रहस्य रेकर्ड। त्यो किन यो पुस्तक किशोरकिशोरीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ, तिनीहरूले विश्वास गर्नेछन् आफ्नो विचार को एक ठूलो संख्या एक सुन्दर र अनुपम थियो छ। किशोर डायरीहरू रंगीन तस्वीर सिर्जना मजा, वा असामान्य कवर संग। सोही, डायरी ठूलो उपहार हुनेछ।
एक साधारण नोटबुक को एक सुन्दर डायरी कसरी बनाउने?
रचनात्मक व्यक्तिहरूलाई एक सुन्दर खल्ती-किताब यसलाई गर्नाले, पुस्तक जारी गर्न आफूलाई प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
सुन्दर कलाकृति र रंगीन स्टिकर एक मोटी नोटबुक किन्न। धेरै खण्डहरू मा टास्ने स्टिकर नोटबुक विभाजन। प्रत्येक खण्ड एक विशेष विषय समर्पित गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, तपाईं पहिलो सूची किनमेल सूची को दोस्रो खण्ड रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, तेस्रो र यति मा। डी लागि व्यञ्जनहरु यी बिलकुलै फरक मूल डायरीहरू कुनै पनि व्यक्तिमा हुन सक्छ छन्।
एक कसरी बनाउने आफ्नै हातले डायरी जमीन देखि?
धेरै बालिका बुनाइ र आफ्नो डायरीहरू सिर्जना गर्न आदी छन्। तपाईंको आफ्नै सिर्जना गर्न, तपाईंले एक मोटी गत्ता, कागज, गोंद, कैंची सिट र हुनुपर्छ , scrapbooking लागि कागज।
Needlewoman अक्सर तिनीहरूले असामान्य डायरीहरू सिर्जना जो संग प्रत्येक अन्य टेम्प्लेट संग साझेदारी गर्नुहोस्। नियम, यी टेम्प्लेट, तार बनेको हो फूल र चित्रहरु संग सजाया। तिनीहरूले बाहिर मुद्रित र आफ्नो भविष्य डायरी एकदम राम्रो पृष्ठ बाहिर बारी गर्न सकिन्छ। तपाईं sketchbooks सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले नियमित सेतो कागज प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
आन्तरिक पृष्ठ सी छ। कि पछि तपाईं गत्ता बाहिर कटौती र स्क्र्यापबुकिङ लागि उनको सुन्दर कागज को आवरण गोंद गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि तपाईं गत्ता मा सिलना पृष्ठहरूमा गोंद गर्न आवश्यक हुनेछ। यो फिट गोंद "क्रिस्टल" को लागि, यो राम्रो छ गत्ता राख्छ। को गोंद सुक्खामा अनुमति दिनुहोस्। यी नियमहरू निम्न द्वारा, तपाईं आफ्नो असामान्य डायरीहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
साना बच्चाहरु आरेखित र लेख्न जसमा कागज आफ्नै पुस्तिका बनाउन किनभने डायरी, गर्न धेरै सजिलो छ।
मिठाई को क्रिसमस संरचना: स्वादिष्ट उपहार
ग्राफिक्स चालकलाई कसरी पुन: स्थापना गर्ने? भिडियो कार्ड चालकहरू अपडेट गर्दै
एक संकीर्ण गलियारे को प्रवेश द्वार हुनु पर्छ?
Tsandripsh - निजी क्षेत्र। Tsandripsh अब्खाजिया। अब्खाजिया, Tsandripsh मा आराम
माटोको हीटर - सान्त्वना र न्यानोपन आफ्नो घर मा!